अस्तव्यस्त संगीत बजार : भ्युजका लागि १४ लाख सम्मको ‘बुस्ट’ | Rajatpatonline Nepal's No. 1 Films News Portal
अस्तव्यस्त संगीत बजार : भ्युजका लागि १४ लाख सम्मको ‘बुस्ट’
नेपाली संगीत बजार अस्तव्यस्त छ। दिनहु आधा दर्जन बढि म्युजिक भिडिओ सार्वजनिक हुन्छन्। कुनै कुनै दिन त दर्जन बढि नै सार्वजनिक हुन्छन्। सार्वजनिक भएका सबै म्युजिक भिडिओ हिट हुँदैनन्। आक्कल झुक्कल गीतहरुले मात्र दर्शकको मन जित्छ।
यता, सिनेमाका सबैजसो कलाकारहरु पनि यतिबेला म्युजिक भिडिओमै ब्यस्त छन्। दिनहुँ लाखौँ कमाउछन् सिनेमाका हीरो हीरोईनहरु। महँगो पारिश्रमिक लिन्छन्। तर, निर्माताले भ्युज चाहिँ नक्कली किन्नु पर्छ। हिट कलाकार लिएर भिडिओ बनाउदा पनि भ्युज नआएपछि उपाय त लाउनै पर्यो नि। हैन त?
जे होस्, लकडाउनमा सिने क्षेत्रका व्यक्तिहरु फुर्सदिला बनेपछि उनिहरु पनि म्युजिक भिडियो निर्माण तिर लागे। ठुला ठुला निर्माताले समेत म्युजिक भिडिओ निर्माण गरे। सिनेमाका निर्देशकहरु पनि भिडियो तिरै लागे। यसो गरेसी धेरै भिडिओ उत्पादन त हुने नै भए। माग भन्दा बढि उत्पादन भएपछी त्यो प्रोडक्टको बेहाल हुने निश्चित त छ नै।
त्यसो त, केहिले राम्रा गीतको राम्रा भिडिओ पनि बनाइरहेका छन्। ति गीत र भिडिओहरुलाई दर्शकले रुचाएका पनि छन्। तर, यो संगीत बजारमा बुस्ट गर्ने एउटा ट्रेण्ड छ। यो ट्रेण्ड चर्चाका लागि गरिने खर्च हो। यो ट्रेण्डले गर्दा कतिपय राम्रा गीत संगीत र भिडिओहरु छायाँमा परेका छन्। गोप्य स्रोतका अनुसार केहि हप्ता अगाडि सार्वजनिक भएको एउटा मल्टिस्टारर म्युजिक भिडिओमा १४ लाखको बुस्ट गरिएछ। सो भिडिओमा असाधारान भ्युज आएपछि कसरी यस्तो भयो, भनेर बुझ्दै जाँदा यस्ता कुराहरु सुन्नमा आए।
भिडिओहरुमा २/३ लाख सम्मको बुस्ट गरिने हल्ला र तथ्य त पुरानै हुन्। तर, १४ लाखको बुस्ट सायद पहिलो पटक गरिएछ। त्यसो त, बुस्टबाट आएको भ्युज घट्ने गरेका छन्। त्यो भिडिओको भ्युज पनि घट्ने लगभग निश्चित नै छ। जे होस्, प्रतिभावान कलाकार, राम्रा सृजना र राम्रा सर्जक हिट हुनलाई त उहीँ सम्झिने पानि छम्किने।
Previous articleव्यापारीसँग पुजाको प्रेम चर्चा
Next articleसँग-सँगै बर्षा र राज